Buug-tilmaameedka qiimaynta nafaqeynta ee magaalada - Geofumadas
Buug-tilmaameedka qiimeynta dhadigga magaalada
Juunyo, 2013 cadastre, Baridda CAD / GIS
Waayo, ku qiimaysay hantida waxaa jira habab kala duwan, mid ka mid ah arrin loo isticmaalo Latin America iyo Caribbean waa qiimaha bedelka yar ururtay qiimo dhaca ku -oo leh kala duwanaansho yar iyo mid daruuri ah-.
Tani waa mid ka mid ah waxyaabaha ay tahay in aan ku faraxsanahay in aan samaynay, gaar ahaan tan iyo markii ay dhismaha ka mid ah awoodda farsamo iyo waaqiciga ah ee dadka ku adkaysanayaan on dareen caadi ah ahay: Waxaa had iyo jeer u muuqataa sida ruux ganacsi weyn waan muujiyey by
ku dhaqanka badanaa gabayo.
Waxay ka kooban tahay, dukumeenti buuxinaya ra'yiga aan horey u sameeyay oo soo koobaya qayb wanaagsan oo ka mid ah codsiga habka xaddiga tirada bogagga ee u oggolaanaya daabacaadda qaab waraaqo ah oo ka soo horjeeda. Waxaan hadda daabacayaa sababtoo ah qof ayaa noqon kara mid wax ku ool ah, iyo gaar ahaan mahadnaqa koox dad ah -hadda ku dhowaad waayeelka- taas oo ku saabsan 30 sano ka hor waxay ku diiwaangeliyeen ujeedadooda ugu wanaagsan ee la saaro qalabka sawir qaadaha iyo chinographs; waxaan ku soo celineynaa habka khafiifka ah si loo kordhiyo nolosheeda sababtoo ah degmooyin badan ayaa sii wadi doona in loo isticmaalo xirfad qoto dheer. Sidoo kale waxaan rumaysanahay in marka aan dib u cusbooneysiinno aqoonta, tayada cusubi ay soo baxaan oo ina siisa adeegsigeena inaan xitaa ka fekero.
Dukumeentiga waxa ku jira
Dukumentigu wuxuu ku dhisan yahay saddex qaybood:
Qaybta kowaad waxay leedahay qaybo kala duwan oo ku saabsan qiimaynta iyo habka. Tani waxay faa'iido u lahaan kartaa habka tababarka ama xaq u yeelashada dukumeentiyada qaabka loo baahan yahay aasaaska.
Qiimaynta weyn ee guryaha
Waxyaabaha saameynaya qiimaha dhul magaalo
Qiimeeynta dhuxusha ee magaalada
Qiimaynta guryaha magaalooyinka
Noocyada qaab dhismeedka
Ka dibna qaybta xigta waxay faahfaahinaysaa nooca wax-soo-gelinta loo baahan yahay si loo isticmaalo habka. Waxaa cad in ay u aaddan tahay asaasiga marka la eego qalabka; Waxaa jiri doona kuwa farsameynaya waxsoosaarka badan ee ka faa'iideysanaya farsamada GIS ee heer sare.
Tilmaamidda kala soocidda dhismayaasha caadiga ah
Catalog of qiimaha dhismaha
Khariidadda qiimayaasha dhulka magaalooyinka
Qalabka iyo saadka
Dhismaha codsiga habka
Qaybta saddexaadna waxaa ka mid ah buuxinta kaarka magaalo, oo leh mid kasta oo ka mid ah beeraheeda, oo ku soo gala qiimeynta iyo xisaabinta canshuurta.
Halkan waxaad ku arki kartaa dukumeentiga ku-meel-gaadhka ah.
Qiimaynta qiimaynta ee Cadastre by G_Alvarez_
Sida dukumenti taxane ah, waxay noqon kartaa mid gaaban mawduucyada lagu diiwaangeliyey buug kale ama DVD-ga waxbarasho ee la socota kitiga.
Post Previous«Previous Template in la abuuro file DXF liiska Excel of dhibcood
Post Next Vbookz, waa codka ugu wanaagsan ee loogu talagalay iPad / iPhone / iPodNext »